EatFresh.org | जेपीएमए, इंक
यी व्यञ्जनहरु EatFresh.org वेबसाइट बाट अंशहरू हुन्। हामी यी व्यञ्जनहरूसँग साझेदारी गर्न अनुमति प्रदान गर्नको लागि EatFresh.org लाई धन्यवाद दिन चाहन्छौं। Eatfresh.org लेहको पैंट्रीको एक परियोजना र मानव सेवा एजेन्सी शहर र स्यान फ्रान्सिस्कोको काउन्टीमा रहेको छ। लेहको पैंट्री EatFresh.org उपकरणहरूको विकास र रखरखाव प्रबन्ध गर्दछ, र क्यालिफोर्निया भरमा उपकरणहरू कार्यान्वयन गर्न पार्टनर समर्थन प्रदान गर्दछ।
EatFresh.org मा विशेषताहरुका लागि उनीहरूको द्रुत डेमो भिडियो हेर्नुहोस्
ईएएफएफआरएचएए ए ए मोबाइल-अनुकूल USDA-अनुमोदित वेबसाइट हो जसले क्यालोफ्रे आबादीको लागि प्रेरणा र उपकरण प्रदान गर्दछ र जसले सेवा गर्दछ। यो सुविधा, कम लागत व्यञ्जनहरू सुविधा गर्दछ; खाना खाई को कम गर्न को लागि "भोजन योजना" स्वास्थ्य सल्लाहहरू; खाना खोज जानकारी; र एक डायटिटीलाई सोध्नुहोस्। वेबसाइट अंग्रेजी, स्पेनिश र चीनीमा उपलब्ध छ।
EatFresh.org को लक्ष्य हो:
ताजा खानाको साथ घर मा खाना पकाउन प्रोत्साहन गर्न र कम से कम प्रसोधित गैर-perishables।
प्रयोगकर्ताहरूलाई देखाउने स्वस्थ परिवर्तन हुन्छ भने बाधाहरू अवस्थित भए तापनि।
जीवन शैली / आहार छनौटहरू बीचको पुरानो रोगको रोकथाम राम्रोसँग बुझ्नको लागि।
EatFresh.org मा EatFresh.org मिनी कोर्स पनि समावेश छ, जो एक नि: शुल्क पोषण कोर्स हो जुन पूर्ण रूपमा अनलाइन छ। यसमा 15 पोषण र स्वस्थ जीवनका विषयहरू समावेश छन् जुन प्रारम्भिक कम्प्यूटर कौशलका साथ कम-साक्षरता दर्शकहरूको लागि डिजाइन गरिएको छ। यो पाठ्यक्रम अंग्रेजी र स्पेनीमा उपलब्ध छ।
रोटीको सट्टा कर्करहरू प्रयोग गरेर वा फ्रेकरहरूले यस भोजनलाई ताजा तुल्याउने र न्यानो महिनाको लागि उत्कृष्ट छनोट बनाउँदछ।
बच्चाहरूले यस फैललाई प्रेम गर्नेछन् - तिनीहरूलाई केही माप, बन्द र मिश्रण गर्न दिनुहोस्!
कालो बीन ब्राउन
कम फ्याट ओरेंज ड्रेसिंग
मोरक्को गाजर सलाद
यो मीठा सलाद भिटामिन ए संग पैक गरिएको छ, जो तपाईंको आँखाहरु लाई स्वस्थ राख्छ।
खाने गोभी एक भिटामिन सी र म्याङ्गनीजको उत्कृष्ट स्रोत हो। यस स्टेलर एन्टिओक्सिडेंटमा यो खट्टा स्पिन प्रयास गर्नुहोस्।
यो सूप अर्को दिनको शुभकामना पनि राम्रो वा राम्रो हुन्छ। यो एकदम सही, बनाउनुहोस अघिल्लो नुस्खा।
Avocado, चावल र बीन्स
यो मिठाई जसले तपाईंलाई गर्म पार्नेछ र तपाईंको घरको गंध स्वादिष्ट बनाउनेछ!
Savory Potato सलाद
केली चिप्स एक स्वस्थ र संतोषजनक नाश्ता हो।
Veggie Quesadillas Cilantro दही DIP संग
गर्म लेसेल सलाद
यो उष्णकटिबंधीय प्रेरित डिश धीरे एक धनी स्वाद को लागि मसालेदार हुन्छ।
केला बेरी Smoothie
यस घरको पछाडीको सानो थोरै थोरै थोरै थोरै टुक्रा फ्याँक्नु अघि तपाईंले घर छोड्नु हुन्न त्यसैले तपाईलाई दिनको समयमा स्न्याक गर्न स्वस्थ हुनेछ।
गर्मीको सब्जियों को प्रयोग को लागि यहाँ एक नयाँ नयाँ तरीका छ।
ढिलो कुकर लेन्सिल सूप
मस्तिष्कमा उच्च पोषणको महत्त्व छ जुन कसैको आहारमा यो स्वस्थ सुराग समावेश गरेर लाभ उठाउन सक्छ।
दालचीनी-सुन्तला चिसो मीठो आलु
ताजा र स्वस्थ मीठे आलुहरू स्वादयुक्त शीशेको साथ
गहिरो चावल र ब्ल्याकिरी मटर
काजुनले चावल र साउज कपासारोललाई प्रेरित गरे
चिनी मिर्च र टको सॉस यो पिज्जा एक मसालेदार मोडि दिन्छ।
तीन बहनों सलाद
"तीन बहिनीहरू" मकई, सेम, र स्क्वैश हुन् (जस्तै जुक्नी)। मूल अमेरिकीहरूले तिनीहरूलाई बगैंचामा एक साथ लगाए किनभने तिनीहरू एकअर्काको विकास गर्छन्। "तीन बहिनीहरू" सँगसँगै तपाईंको शरीर एक पोषणशील भोजन दिन एकसाथ काम गर्दछ।
यो सजिलो छिटो र पोषण नाश्ता तपाईंको घर मा एक स्टपल हुनेछ।
चावल पिलाफ संग सामन
सब्जी सलाद तांग एवोकडो ड्रेसिंग संग
यो नुस्खा एक क्रीमयुक्त, स्वस्थ ड्रेसिंग बनाउन को लागी एभोकैडो प्रयोग गर्दछ जसले राम्रो स्वाद दिन्छ।
कच्चा Zucini रिबनहरु संग Parmesan
पास्तामा यो स्पिन कोसिस गर्नुहोस् र यसको सट्टा जक्र रिबन प्रयोग गर्नुहोस्।
ब्राउन चावल पोरिज
यसलाई स्विच गर्नुहोस् र यो स्वस्थ बिहान सुत्ने प्रयास गर्नुहोस्!
यो नुस्खा एक उत्सव नाश्ता, रात को खाने को लागि, या एक परिवार को सभा को लागि महान छ।
सब्जी र टोफू हलचल-फेरी
यो हलचल त्रास रंगीन, स्वादशील र पोषक तत्व संग भरी छ। टोफु एक उत्कृष्ट वैकल्पिक प्रोटीन हो जुन क्याल्सियम र भिटामिन ई को एक महान स्रोत हो।
कालो बीन र मकई पिरास
दालहरू प्रोटीनमा उच्च छन् र सेम भन्दा बढी नाजुक चम्मच।3दिनसम्म फ्रिजमा बायाँ राख्नुहोस्।
कालो-आँखाको मटर र ओकुरा
यो डिनर आफ्नो आहार स्विच र आफ्नो खाना पकाउने रेपोटोयर विस्तार गर्न एक राम्रो तरिका हुनेछ।